सरकारी सम्पत्तिमा आसेपासे र बिचौलियाको रजगज, पात्र फेरिए, प्रवृत्ति उस्तै ! | Dainik News Nepal
सरकारी सम्पत्तिमा आसेपासे र बिचौलियाको रजगज, पात्र फेरिए, प्रवृत्ति उस्तै !
काठमाडौं । यतिवेला बतास समुहले राज्यको सम्पत्ती कौडीको भाउमा लिएर भोगचलन गरिरहेको विषयले देश तातिएको छ ।
राजाको सम्पतीमा नवराजाको दोहन चलिरहेको छ । जसले गर्दा पात्र फेरिए पनि प्रवृद्धि नफेरिएको भन्दै सरकार र राजनीतिक दलप्रति नागरिक थप रुष्ठ बनेका छन् रु
बतास समुहले यसअघि नै राज्यको सम्पतिमाथि दोहन गर्दै आएको थियो । जसलाई चाल पाएर पनि सरकारी पक्ष नदेखे झै गरिरहेको थियो । जब बतास नारायणहिटी जस्तो ऐतिहासिक दरबार नै पस्यो, तव सबैको आँखा खुल्यो ।
यस विषयमा अघि नै पनि खबरहरु नबाहिरएका पनि हैनन् । यहि समुहले पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरुलाई खान र बस्न सहज होस् भनेर पाशुपत क्षेत्रमा बनेको धर्मशालामा होटेल चलाउन थालेको पनि लामै समय भईसकेको छ ।
पशूपति क्षेत्र विकास कोषको मिलेमतोमा १९ रोपनी जग्गामा फैलिएको ३४ करोड लागतको ८८ कोठे धर्मशालामा अहिले ‘होटल आनन्द’चलिरहेको छ । यहाँ बस्न एकरातकै करिब सात हजार तिर्नुपर्छ ।
पाटन दरबार क्षेत्रको मंगलबजारपट्टिको कोत पाटी मल्लकालीन राजा श्रीनिवासले बनाएका हुन् । पाटीमा रहेको ३३ वटा कवलमध्ये १८ वटा कवल बतास समूह अन्तर्गतको बी म्यानेजमेन्टले ठेक्का लिएको छ ।